Ungayikhetha kanjani ikhebula lomsindo? - I-Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Izinga lomsindo elihle kakhulu alinqunywa kuphela ukusebenza kwemishini yokulalelwayo, futhi izintambo ze-AV nazo ziyisixhumanisi esibalulekile esinganakwa. Ikhebula le-AV yisifinyezo se-Ikhebula lomsindo futhi Video Ikhebula kumsindo wasekhaya. Ingakususa ngempumelelo ukuphazanyiswa kwamandla kagesi kwangaphandle futhi idlulise isiginali ngokweqiniso, okusho ukuthi lo ulayini osezingeni eliphakeme.
1. Ukuhlukaniswa kanye nemisebenzi esemqoka yomsindo wasekhaya
Umsindo wasekhaya uvame ukuhlukaniswa ngezigaba ezimbili: umsindo omsulwa nomsindo waseshashalazini lasekhaya. Umsindo omsulwa ubizwa nangokuthi umsindo we-HI-FI, owakhiwa i-pure amplifier (okukhishwa kweziteshi ezimbili kuphela), izipikha ne-disc player, futhi ijwayele ukusetshenziselwa ukulalela umculo nezingoma. Umsindo waseshashalazini lasekhaya ubizwa nangokuthi i-AV combination audio, engadlala umculo nezingoma eziteshini ezimbili, kanye nakuma-disc eziteshi eziningi. "Ama-audiophiles" ngokuvamile adlala umsindo omsulwa, futhi ikakhulukazi alalela umculo wakudala waseNtshonalanga.
2. Ubudlelwano phakathi kwekhebula le-fiber fiber, ikhebula le-coaxial nedecoder namandla amplifier
Isidlali sediski "singafunda ikhodi" futhi "sinqume", kepha ukuze sinciphise izindleko, umsebenzi waso wokumiselela imvamisa awusizo kangako. Ukukhuphula izinga "lokukhipha amakhodi" nokwenza umsindo ube muhle ngokwengeziwe, kuyadingeka ukuthi uhlonyiswe nge-decoder ezimele kanye ne-amplifier yamandla enomsebenzi wokukhipha ikhodi. Izintambo ze-fiber ezibonakalayo ziyadingeka phakathi kwe-disc drive ne-decoder, naphakathi kwe-disc drive ne-decoding power amplifier. Ixhunywe ngekhebula le-coaxial futhi inesibopho sokudlulisa isignali yedijithali yomsindo "funda" isuka kwisidlali sediski iye kwideskithophu ezimele noma i-amplifier yamandla enomsebenzi wokuhlaziya ukuze "isinqumele" ibe yisiginali yomsindo. Le ndlela yokudlulisa ivame ukusetshenziswa ezinhlelweni zomsindo ezisezingeni eliphezulu.
3.Izintambo zomsindo, izintambo zevidiyo, nezintambo ze-coaxial azikwazi ukuxubaniswa
Ukusuka ngaphandle, ikhebula levidiyo, ikhebula lokulalelwayo, nentambo ye-coaxial konke kwenziwa ngomzimba wocingo namatheminali emaphethelweni womabili, futhi onke adlulisa amasiginali ngensimbi yangaphakathi ngaphakathi. Ngakho-ke, kulula ukuthi othile axube abathathu ngentando. Lokhu kungavula nesiginali, kepha ikhwalithi yomsindo nekhwalithi yesithombe nakanjani ayisebenzi kahle.
4. Qhathanisa izimo izintambo ezimbili ze-AV ezinomsebenzi ofanayo okufanele zibe nazo:
①Amanani namamaki walokhu okubili kufanele kusondele;
②Kufanele kusetshenziswe isethi yezipikha efanayo, ucezu lomculo olufanayo, ivolumu efanayo, nemvelo efanayo yokulalela;
③Ama-disc alalelwayo nawokuhlola asetshenzisiwe kumele abe maphakathi naphezulu, ekugcineni okuphansi kakhulu kuzokwenza umsindo ngokwawo, ngakho-ke kunzima ukuwaqhathanisa.
Isidingo sokukhetha ikhebula le-AV elifanele umsindo
Ikhebula le-AV, elenza umsebenzi wesiginali yokudlulisa umsindo, lidlala indima ebalulekile kulo lonke uhlelo lokulalelwayo. Intambo yokulalelwayo enhle nentambo yomsindo engalungile ayisebenzisi izinto ezahlukahlukene kuphela, kepha futhi inezimiso ezihlukile zokwakheka kwangaphakathi. Ngakho-ke, kukhona umehluko othile ekusebenzeni kokudluliswa kwesiginali nokumelana nokuphazamiseka kwangaphandle kwe-electromagnetic.
Umsindo osezingeni eliphezulu unentambo yokulalelwayo esezingeni eliphakeme, umsindo ophakathi nendawo unentambo yokulalelwayo yaphakathi naphakathi, nomsindo osezingeni eliphansi unentambo yomsindo esezingeni eliphansi. Lesi yisimiso esinengqondo kunazo zonke sokutshala imali ukuqinisekisa ukusebenza kahle komsindo. Othile uthenge umsindo wezinga eliphezulu, kodwa ukhethe ikhebuli yomsindo esezingeni eliphansi ukonga imali. Lokhu akuhlukile nokushayela iMercedes-Benz uyise egalaji likaphethiloli nokufaka uphethiloli oshibhe kakhulu ongu-90 #. Phezulu, konga imali, kepha umphumela wangempela awumuhle. Ukusebenza okuhle kwemoto.
Imvamisa ekucushweni komsindo osezingeni eliphezulu, isilinganiso sokutshalwa kwemali kulayini womsindo singu-15% ~ 30%, okunengqondo kakhulu. Noma ulalele okujwayelekile, awukwazi ukusebenzisa ikhebula le-AV elisezingeni eliphansi kakhulu, ngoba lokhu ngeke kugcine ngokunciphisa isignali kuphela, kepha isignali edluliswayo isengozini yokuphazanyiswa kwangaphandle ngogesi, okuzogcina kubangele ukuphazamiseka kwemisindo.
Ukuqaphaion wokusetshenziswa kwekhebula le-AV nokugcinwa
Uma unganaka lezi zinto ezilandelayo zekhebula le-AV elisetshenziswayo, ngeke nje lithuthukise ukusebenza komsindo kuphela, kepha futhi lizokwandisa impilo yenkonzo yekhebula:
1. Izintambo ezinemisebenzi ehlukile azikwazi ukuxubaniswa ngokuthanda, ngokwesibonelo, izintambo zomsindo azikwazi ukusetshenziswa esikhundleni sezintambo ze-coaxial;
2. Zama ukungagobisi ikhebuli ye-AV uma uyisebenzisa, futhi kungcono ukuyigcina ikude namandla kagesi;
3. Ikhebuli ye-AV kufanele ibe mfushane ngangokunokwenzeka uma yanele, ubude obedlulele buzokhulisa ukulahleka kwesiginali kuphela;
4. Usayizi wekhebula lesipika kufanele ukhethwe ngokuya ngosayizi wamandla alalelwayo. Uma incane kakhulu, ukuhanjiswa kwesiginali kuzobambezeleka, futhi isipikha ngeke siveze umsindo omuhle; uma incane kakhulu, ukulahleka kwesiginali kuzokwanda, nomthwalo ku-amplifier yamandla uzokhula, nesipika futhi ngeke sikhiqize umsindo omuhle;
5. Ukuxhumeka phakathi kwekhebula le-AV nengaphandle kufanele kube kuqinile. Uma oxhumana naye emubi (njengokuwa, njll.), Kuzodala umsindo osuka kusipika, futhi ezimweni ezibucayi, kuzodala ukuthi izingxenye zishe;
6. Ngemuva kokuthi ikhebuli ye-AV isetshenziselwe inani elithile leminyaka, amatheminali wensimbi nomgogodla wensimbi kungaxutywa (okusho ukuthi "ukuguga"), okuzothinta umphumela womsindo, futhi kufanele kuthathelwe indawo ngokwesimo sangempela.